लेख Archives - UrjaKhabar
१ घण्टा अगाडि Rajendra Timalsina
स्पे नको म्याड्रिडमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष मुलुकहरूको पच्चीसौं सम्मेलन बिहीबार सकिँदै छ । यो सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य विश्वभर बढ्दो जलवायुजन्य जोखिम कसरी न्यून गर्ने अनि जोखिम भोगिरहेका र विकासको दिशामा अघि बढिरहेका नेपालजस्ता मुलुकलाई कसरी न्याय दिलाउने भन्ने हो ।
चार वर्षअघि (२०७२ मंसिरमा) फ्रान्समा पक्ष मुलुकहरूबीच भएको ‘पेरिस सम्झौता’ का कारण पछिल्लो पटक अमेरिकाले सदस्यताबाट हात झिकेका कारण ‘कोप २५’ अर्थात् यस पालिको सम्मेलन खासै उपलब्धिमूलक भने बन्न नसक्ने देखिएको छ ।
मङि्सर २५, २०७६ Rajendra Timalsina
जलविद्युत्मा अबको चुनौती उत्पादन हुने बिजुलीको बजार व्यवस्थापन हो, यस्तो चुनौती समस्यामा परिणत हुने अवस्था छ
सरकारले हचुवा तालमै भए पनि महत्वाकांक्षी चाहना राख्दै पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य त तय गर्‍यो, तर उत्पादित विद्युत्लाई बजार व्यवस्थापन गर्ने सोच र योजना भने बनाएन । भारतले हाम्रो बिजुली किन्नेछ र बंगलादेशतर्फ सहजै निर्यात गर्न दिनेछ भन्ने सोच यसबीचमा बनेका सरकारले राखे, तर अवस्था त्यस्तो देखिएको छैन ।
पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट भन्ने लक्ष्य पूरा नहुने भए तापनि निजी क्षेत्रको प्रयासले गर्दा केही प्रगति भने भएकै छ । बहावमा आधारित धेरै आयोजना छिटै सम्पन्न हुँदै छन् भने कैयौँ निर्माणाधीन छन् । उपल्लो तामाकोसी सम्पन्न हुँदै छ, तर देशभित्र विद्युत्को माग बढेको छैन, स्थिरजस्तै छ । कैयौँ आयोजनाको विद्युत् खरिद ‘टेक अर पे’ मा गरिएको र पहिलाका आयोजनासँग गरिएको निश्चित मात्राको बिजुली खरिद गर्ने पिपिए सम्झौताका कारण सरकारको अधीनमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित बिजुली किन्नैपर्ने अवस्था छ ।
उत्पादकलाई भुक्तानी दिनैपर्ने हुन्छ । उत्पादित बिजुली खपत नहुने अवस्था आएमा प्राधिकरण टाट पल्टिनेमा कुनै शंका छैन । वर्षात्को समयमा एक सय मेगावाट मात्र विद्युत् खेर जाँदा प्रत्येक दिन ११.५ करोड र हिँउदमा २१ करोड घाटा हुनेछ । नयाँ विद्युत् बजार सिर्जना गर्न सकिएन भने अबको दुई वर्षमै हजार मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली खेर जानेछ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिदिन अर्बौं रूपैयाँ गुमाउनेछ भने वार्षिक घाटा चार खर्ब हाराहारी हुनेछ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो भने नेबिप्रा मात्र होइन, देश नै गहिरो आर्थिक संकटमा धकेलिनेछ ।
पर्याप्त बिजुली उत्पादन नहुने अवस्थासम्म फरक किसिमका चुनौती थिए र तीमध्ये कैयौँ यथावत् नै छन् । जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारले त्यस्तो गर्न सकेको छैन । बुढीगण्डकी आयोजना तुरुन्त निर्माणको चरणमा जान सक्थ्यो, तर अहिलेसम्म केही प्रगति भएन । ०७२ सालमा जारी गरिएको ऊर्जा संकट निवारण अवधारणाअनुसार काम हुन सकेको देखिन्न । सरकारकै अकर्मण्यताका कारण चिनियाँ कम्पनीले पश्चिम सेती आयोजना छोडेर हिँड्यो । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणामा पनि केही प्रगति छैन । बहावमा आधारित जलविद्युत् आयोजना मात्र निर्माण हुँदा वर्षात् र हिँउदको उत्पादन ग्याप झन् गहिरिँदो छ ।
मास्टरप्लान र लाइसेन्स वितरण पुरानै तरिकाले चलेको छ र ऊर्जा दलालहरूको सक्रियतामा कुनै कमी आएको छैन । आयोजना ओगटेर काम नगर्ने प्रवृत्ति उस्तै छ । ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको आयोजना एक एनआरएन नेतालाई सुम्पिएर ३५० मेगावाटमा क्षमता न्यूनीकरण गर्ने काम भयो, तर काम अघि बढेन । तमोर जलाशययुक्त आयोजनाका कारण निकै धेरै काम सम्पन्न भएको काबेली (३८ मेगावाट) आयोजना अहिले तुहिएको छ भने २१ मेगावाटको हेवा आयोजना डुब्ने अवस्थामा छ । तर, तमोर जलाशय बन्ने/नबन्ने अझै निश्चित हुन सकेको छैन, विस्तृत अध्ययनकै चरणमा छ ।
उत्पादित बिजुली खपत नहुने अवस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण टाट पल्टिने मात्र होइन, मुलुक नै गहिरो आर्थिक संकटमा धकेलिन सक्छ । नयाँ विद्युत् बजार सिर्जना नहुने हो भने अबको दुई वर्षमै हजार मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली खेर जानेछ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिदिन अर्बौं रूपैयाँ गुमाउनेछ, वार्षिक घाटा चार खर्ब हाराहारी हुनेछ ।
प्रसारण र वितरण लाइनको पर्याप्त विस्तार नहुँदा अहिले पनि जनताले विद्युत् पाउन सकेका छैनन् भने कैयौँ विद्युत् उत्पादकले उत्पादित बिजुली ग्रिडमा पठाउन सकेका छैनन् । बलियो सरकार भएको अनुभूति प्रसारण लाइनको प्रगतिमा देखिन्न । दीर्घकालीन र अल्पकालीन विद्युत् आयात र निर्यातका लागि चीन तथा भारतसँग थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अनि सार्कस्तरीय (भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान, भुटान) र अन्य देशलाई समेत समेट्ने गरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तारमा कत्ति पनि ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यी काम द्रुत गतिमा होऊन् भनेर अन्य साझेदार देशसँग समन्वय गर्नु आवश्यक छ, तर त्यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
विद्युत् प्राधिकरणमा निकै धेरै सुधार गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा आवश्यकताविना नै भर्ती गरिएका अनावश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । उत्पादन, प्रसारण र वितरण विभागलाई छुट्याएर स्वावलम्बी बनाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । सरकारले धेरै लामो समयदेखि यस्तो प्रक्रिया सुरु गर्ने भने तापनि कर्मचारीको दबाबमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले फेरि यसलाई अनबन्डल (टुक्र्याउने) भन्ने खबर आइरहँदा नेविप्रा कर्मचारी संगठनले विरोध गरेको छ, तर सरकारले खुट्टा कमाउनु हुन्न ।
कैयौँ समस्याका बाबजुद पनि निजी क्षेत्रको योगदानका कारण अब देशमा प्रशस्त बिजुली उत्पादन हुने अवस्था छ । अबको दुई वर्षमा नै हिँउदमा पनि भारतबाट बिजुली आयात नगरीकनै लोडसेडिङ गर्नुनपर्ने अवस्था आउने पक्का छ भने वर्षात्मा मागभन्दा एक हजार मेगावाट धेरै उत्पादन हुने अवस्था छ । तसर्थ, अबको चुनौती भनेको उत्पादन हुने बिजुलीको बजार व्यवस्थापन हो । यो चुनौती आउँछ भन्ने त पक्का नै थियो, तर प्राधिकरण र सरकारले सोहीअनुरूप काम नगरेकाले अब चुनौती समस्यामा परिणत हुने अवस्थामा छ ।
भर्खर सम्पन्न ऊर्जा सम्मेलनमा पनि विद्युत् बजारबारे निकै चर्चा भयो । खासगरी, निजी क्षेत्रले निकै चिन्ता जाहेर गर्दै आफूले गर्न सक्ने प्रयत्न जारी राखेको देखियो । चिन्ता जायज छ, तर एक मात्र विद्युत् खरिदकर्ता र वितरक भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले देशभित्र केही गर्न सक्ने अवस्था छैन भने विदेश निर्यात गर्न सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । बिजुली खपतका लागि मुख्य दुई बजार छन्– आन्तरिक र बाह्य ।
देशभित्र नै सक्दो मात्रामा बिजुली खपत गराउन सकेमा सबैभन्दा उत्तम हुनेछ । तर, प्रसारण र वितरण लाइनको अभावले तुरुन्त नयाँ स्थानमा विद्युत् वितरण असम्भवजस्तो देखिन्छ । आन्तरिक खपतको सबैभन्दा बलियो आधार विद्युत्को पहुँच बढाउनु नै हो । घरायसी खपतभन्दा उद्योग बढाउन सकियो भने खपत बढ्नेछ, तर स्थायी सरकार निर्माण भए पनि नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम उत्साहजनक छैन । अर्कोतर्फ भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति नहुँदा भइरहेका ग्राहकले नयाँ घरायसी उपकरण थप्न आनकानी गर्दै छन् । भरपर्दा ट्रान्सफर्मर र वितरण लाइन नहुँदा विद्युत् पहुँच पुगेका ग्राहकले अझै पनि वैकल्पिक स्रोत राखिरहेका छन् ।
खाना पकाउन विद्युत् प्रयोग गर्न ग्राहकलाई प्रेरित गर्न सकिएको छैन । हाम्रो देशको विद्युत् महसुल तुलनात्मक रूपमा महँगो छ । एलपिजी ग्यास र मट्टीतेलभन्दा बिजुली सस्तो हुने गरी सरकारले अनुदान दिएर पनि ग्राहकलाई बिजुलीको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरेमा बिजुली खपत निकै बढ्नेछ । काठमाडौंमा भाडामा बस्नेले प्रतियुनिट रु. १५ सम्म तिरेर बिजुली प्रयोग गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा ग्यास त्यागेर बिजुली प्रयोग गर्ने अवस्था छैन । कोठा वा फ्ल्याट भाडामा लिएर बस्नेहरूको संख्या निकै ठूलो भएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । बेलुका र बिहान खाना पकाउने समयमा बिजुलीको मूल्य कटौती गर्दै सस्तो बनाउने हो भने ग्यास विस्थापित गर्न गाह्रो छैन ।
विद्युतीय सवारीसाधन, रोपवेजस्ता विद्युत् खपतका माध्यमलाई तीव्रताका साथ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने वेला आएको छ । यो दीर्घकालीन विद्युत् खपतका लागि मात्र नभएर नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा देशलाई डो-याउने कदम पनि हुनेछ । अर्कोतर्फ कृषिलाई आधुनिकीकरण कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने विद्युत् दरमा अनुदानको व्यवस्था गर्दा मुलुकलाई ठूलो फाइदा पुग्नेछ । सिँचाइका लागि प्रयोग हुने विद्युत्मा सहुलियत अनि कृषि उत्पादन भण्डार र प्रशोधन गर्ने कोल्डस्टोर र साना उद्योगलाई सहुलियत दरमा बिजुली दिनुपर्छ । तर, भारतका धेरै प्रदेशमा भएजस्तो निःशुल्क विद्युत् वितरण भने घातक हुन्छ, अनुदानकै रूपमा सहुलियत दिनु उचित हुन्छ ।
मुलुकभित्र नै बिजुली खपत गराउन सके सबैभन्दा उत्तम हुनेछ । तर, प्रसारण र वितरण लाइनको अभावले तुरुन्त नयाँ स्थानमा विद्युत् वितरण असम्भवजस्तो देखिन्छ । घरायसी खपतभन्दा उद्योग बढाउन सकियो भने खपत बढ्नेछ, तर नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम उत्साहजनक छैन ।
विद्युत् बजारलाई खुला बनाउँदै निजी वितरकहरू किन भित्र्याउन सकिएन ? विद्युत् महसुल प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको खै ? भरपर्दो आपूर्ति किन गर्न सकिएको छैन ? बजार छैन, तर जलविद्युत्मा विदेशी लगानी ल्याउने भनेर सरकार किन लागिरहेको छ ? वातावरण जोगाउन ग्यास र दाउराको सट्टा बिजुली प्रयोग गरौँ भन्ने चेतना किन जगाउन सकिएन ? यस्ता धेरै प्रश्नको उत्तर खोज्ने वेला आएको छ ।
हाम्रो लागि बिजुलीको सम्भावित बाह्य बजार भारत, चीन र बंगलादेश नै हुन् । भारतसँग इनर्जी बैंकिङ सम्झौता त भयो, तर कार्यान्वयनमा अझै शंका छ । अब इनर्जी बैँकिङभन्दा अगाडि बढेर विद्युत् खरिद–बिक्री प्रक्रियामै जोड गर्नुपर्छ । हामीले धेरै बिजुली उत्पादन गर्ने समय वर्षात्मा भारतमा बिजुलीको माग उच्च हुन्छ, यसबाट हामीले फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।
भारतले सस्तो लगानीमा लाखौँ मेगावाट क्षमताका सौर्य ऊर्जा प्लान्ट निर्माण गरिरहेको छ, तर सौर्य ऊर्जालाई ब्यालेन्स गर्न पनि उसलाई हाम्रो जलविद्युत् आवश्यक हुन्छ । भारतसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने अर्को विकल्प बंगलादेश हो । तर, बिजुली बंगलादेश लैजान सेटेलाइटबाट सकिँदैन, भारतकै भूमि भएर लग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भारतीय भूमिमा आफ्नै प्रसारण लाइन बनाउने वा उसकै प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नेबाहेक अरू विकल्प छैनन् । यी दुवै विकल्पमा भारतको सहमति आवश्यक छ । भारतले दोस्रो विकल्पलाई रोजेको छ र यस्तो अवस्थामा चर्को ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
विजुलीको बजार सन्दर्भमा मूल्य मुख्य कुरा हो । हाम्रो बिजुलीभन्दा सस्तोमा उनीहरूले आफैँ ऊर्जा उत्पादन गर्न सके वा अन्य देशबाट सस्तोमा किन्न सके भने हाम्रो बिजुलीले कसरी उनीहरूको देशमा बजार पाउला ? भुटानबाट भारत आउने बिजुलीको मूल्य (रु ३ हाराहारी)भन्दा हाम्रो बिजुली निकै महँगो छ ।
चीन अहिलेको विकल्प होइन, तर दीर्घकालीन रूपमा भने हो । प्रसारण लाइन नहुनु, जटिल भूगोल, तिब्बतमा पर्याप्त जलविद्युत्का सम्भावना र सिमानानजिक लोड सेन्टर नभएका कारणले गर्दा अझै केही वर्ष हामीले चीनतिर बिजुली पठाउन सक्दैनौँ । पठाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने पनि चीनले आफूले उत्पादन गर्ने बिजुलीको मूल्यभन्दा महँगोमा हाम्रो बिजुली किनिदिनेछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।
सीमाविवाद र बिजुली
भारत हाम्रो नजिकको मित्र हो, तर उसलाई विश्वास गरिहाल्ने स्थिति भने छैन । भारतले अन्तरदेशीय ऊर्जा खरिद निर्देशिकामा राखेको प्रावधान नेपाललगायत अन्य मुलुकको निरन्तर आग्रहपछि परिवर्तन त ग-यो, तर कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतले खरिद गर्ने विषयमा कालापानी, सुस्तालगायतको सीमा विवादको मामिला घुसाउँदैन भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा हामीलाई निकै अप्ठ्यारो पर्नेछ । भारतमा उत्पादित हुने सौर्य ऊर्जाबराबरको मूल्य वा निकै न्यून मूल्यमा खरिद गर्ने अडान भारतले लियो भने हामी निकै समस्यामा पर्नेछौँ । एकातिर सीमा विवादले जलविद्युत् क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर राष्ट्रियताको कुरो छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वले दूरदर्शिताका साथ काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रियताभन्दा ठूलो अरू केही हुन सक्दैन ।
मङि्सर १३, २०७६ Rajendra Timalsina
मङि्सर १०, २०७६ ऊर्जा खबर
मङि्सर ०८, २०७६ ऊर्जा खबर
मङि्सर ०५, २०७६ Rajendra Timalsina